I-Salesforce: Unyaka Wakho Ozenzakalelayo ku-Review Infographic | Martech Zone
NgoMsombuluko, Disemba 30, 2013 Douglas Karr
Njengoba sisebenza namakhasimende, imvamisa sakha amathuluzi okusebenzisana wokubandakanya izivakashi zesayithi. Lokhu okwenziwe ngezifiso iSalesforce Infographic kusuka kuToutApp kumane kuphole kakhulu ukuthi ungabelani ngakho! Vele ungene ngemvume ngemininingwane yakho ye-Salesforce bese uthola umbiko owenziwe waba ngowakho okukhombisa izitayela nokuqonda okuhlukile kokukodwa kwakho Amathuba we-Salesforce kusuka ku-2013.
Nasi isampula salokho okuzokwenziwa yi-infographic ezenzakalelayo yelungu lakho lokuthengisa le-Salesforce:
I-ToutApp iyithuluzi elikusiza ekwenzeni izifanekiso, ukuzenzakalela nokukala impendulo evela kuma-imeyili abamele abathengisi bakho owathumelayo.
Tags: valaIlahlekilesalesforceabasebenzi bavalwa ngenyangaizivumelwano zabasebenziabathengisa amadili ngevikiamathuba okuthengisaamathuba okuthengisa ngenyangaizitayela zabasebenzii-toutappWon